Imigomo Yokusebenzisa - BancaNEO
Uyemukelwa ku-www.bancaneo.org (“Isizinda” noma “Iwebhusayithi”). Le webhusayithi iphethwe futhi isetshenziswa yi-MY NEO GROUP TRUST yase-Italy.
Kuwo wonke amaSayithi, amagama athi “thina”, “thina”, “ingxenyekazi”, “Bancaneo” kanye nokuthi “yethu” kubhekise ku-MY NEO GROUP TRUST. Sinikezela ngale webhusayithi, kufaka phakathi lonke ulwazi, amathuluzi, kanye nezinsizakalo ezitholakalayo kule sayithi kuwe, umsebenzisi, ezincike ekwamukeleni kwakho yonke imigomo, imibandela, izinqubomgomo, nezaziso ezishiwo lapha.
Ngokuvakashela isayithi lethu kanye / noma lapho uvula i-akhawunti nathi, wena (“Umsebenzisi” noma “iKhasimende”) uhlanganyela “Kwinsizakalo” yethu futhi uyavuma ukuboshwa yile migomo nemibandela / imigomo yokusetshenziswa elandelayo (“Imigomo”) , kufaka phakathi leyo migomo nemibandela eyengeziwe nezinqubomgomo ezikhonjiswe lapha kanye / noma ezitholakala ngesixhumanisi.
Le Migomo nemibandela isebenza kubo bonke abasebenzisi besayithi, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo abasebenzisi abayiziphequluli, abasebenzisi, amakhasimende kanye / noma abanikeli bokuqukethwe.
SICELA FUNDA IMIGOMO ELANDELAYO NEZIKHALAZO NGOKUQINISEKILE NGAPHAMBI KOKUSEBENZISA IZINSIZAKALO. Uma ungavumelani nale migomo, INQUBOMGOMO YETHU YOKUPHEPHA, NOMA NOMA YIMUPHI EMGOMO WETHU, AKUFANELE UYISEBENZISE LE NKONZO.
Bancaneo - Ulwazi oluvamile
Mayelana. Bancaneo I-APP EYODWA, ZONKE IZINTO IMALI - Vula i-akhawunti ngemizuzu kusuka ocingweni lwakho, futhi wenze imali yakho iqhubekele phambili. Ihlathi ngenkathi uthenga Sisebenza nozakwethu abahamba phambili bamahlathi emhlabeni jikelele .. Ukuthola eminye imininingwane mayelana nalokho esikwenzayo, sicela ubheke iwebhusayithi yethu.
Izinsizakalo. Sinikeza amasevisi alandelayo:
ama-akhawunti omuntu siqu nawebhizinisi;
ukudluliswa okungenayo nokuphumayo ngezimali ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinkokhelo ze-SEPA ne-SWIFT;
Izinsizakalo ze-eWallet, kufaka phakathi ukulayishwa kwama-eWallet ngamaqembu angaphandle;
ukukhishwa kwemali nge-ATM.
Ukuqonda okubodwa. Sinelungelo lokungeza / ukuyeka noma imuphi umkhiqizo noma insizakalo nganoma yisiphi isikhathi ngokubona kwethu.
Bancaneo kunqunyelwe kuphela kumaqembu angangena ngokusemthethweni futhi enze izinkontileka kwi-Intanethi. Uma ungaphansi kweminyaka engu-18, ungasebenzisa Amasevisi kuphela ngemvume yomzali wakho noma umnakekeli osemthethweni. Sicela uqiniseke ukuthi umzali wakho noma umnakekeli osemthethweni ubuyekeze futhi waxoxa ngale Migomo nawe.
Uyavuma ukusebenzisa iSiza kanye Nezinsizakalo kuphela ngezinhloso ezivunyelwe yile Migomo Yokusetshenziswa futhi ngokuhambisana nayo yonke imithetho esebenzayo, imithethonqubo, kanye nemikhuba noma imihlahlandlela eyamukelwa ngokujwayelekile ezindaweni ezifanele. Ungahle usebenzise iSayithi kanye Nezinsizakalo ekusetshenzisweni kwakho okungekona okokuhweba, okungakhethi, okungabelwe, okungadluliseki, futhi okunomkhawulo, futhi azikho ezinye izinhloso.
Ngeke (futhi ngeke uzame):
Finyelela noma yiluphi usizo nganoma iyiphi enye indlela ngaphandle kwesixhumi esibonakalayo esinikezwa yi- Bancaneo;
Thola ukufinyelela okungagunyaziwe kwe- Bancaneo's uhlelo lwekhompiyutha noma olwenza noma yimuphi umsebenzi ophazamisa ukusebenza kwe, noma okhubaza ukusebenza noma ukuphepha kweSayithi, Izinsizakalo, BancaneoAmanethiwekhi, nezinhlelo zamakhompiyutha;
Finyelela kunoma yiliphi iSayithi noma Izinsizakalo nganoma yiziphi izindlela ezizenzakalelayo noma nganoma yiziphi izici ezizenzakalelayo noma amadivayisi (kufaka phakathi ukusetshenziswa kwezikripthi noma abakhasi bewebhu);
Finyelela noma uqoqe noma yiluphi ulwazi olukhombekayo lomuntu siqu, olufaka noma yimaphi amagama, amakheli e-imeyili noma olunye ulwazi olunjalo nganoma iyiphi injongo, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, izinhloso zokuhweba;
Khiqiza kabusha, uphindaphinde, ukopishe, uthengise, uhwebe noma uthengise kabusha noma yisiphi isici seSayithi noma Sezinsizakalo nganoma iyiphi injongo; futhi
Khiqiza kabusha, uphindaphinde, ukopishe, uthengise, uhwebe noma uthengise kabusha noma yimiphi imikhiqizo noma amasevisi aqukethe noma yiluphi uphawu lwentengiso, uphawu lwesevisi, igama lokuhweba, ilogo noma uphawu lwesevisi okungelakho Bancaneo ngendlela okungenzeka noma ehloselwe ukudida umnikazi noma umsebenzisi ogunyaziwe walezo zimaki, amagama noma ama-logo.
Ilayisense elinganiselwe nokufinyelela kwesiza; Ukusetshenziswa okwamukelekayo
Ungeke: (a) uthengise kabusha noma usebenzise noma yikuphi ukuhweba ngaleli Sayithi noma okunye okuqukethwe yiSayithi; (b) aguqule, aguqule, ahumushe, aguqule unjiniyela, aqoqe, ahlukanise noma aguqule noma yikuphi okuqukethwe kwaleli Sayithi okungahloselwe ukuthi kufundwe kanjalo; (c) ukukopisha, ukulingisa, isibuko, ukukhiqiza kabusha, ukusabalalisa, ukushicilela, ukulanda, ukubonisa, ukwenza, ukuthumela noma ukudlulisa noma yikuphi okuqukethwe kwalesi Sayithi nganoma iyiphi indlela noma nganoma iyiphi indlela; noma (d) asebenzise noma yikuphi ukumba idatha, ama-bots, izicabucabu, amathuluzi azenzakalelayo noma izindlela ezifanayo zokuqoqa idatha nezindlela zokukhipha kokuqukethwe kweSayithi noma ukuqoqa noma yiluphi ulwazi oluvela eSizeni noma kunoma imuphi omunye umsebenzisi weSayithi.
Usebenzisa leli Sayithi ngentando yakho. Uyavuma ukuthi uzozibophezela mathupha ekusebenziseni kwakho leli Sayithi kanye nakho konke ukuxhumana kwakho nomsebenzi owenziwa kuleli Siza. Uma sinquma, ngokubona kwethu, ukuthi uhlanganyele emisebenzini enqatshelwe, bebengahloniphi abanye abasebenzisi, noma bephule imigomo nemibandela, singakwenqabela ukufinyelela kuleli Sayithi okwesikhashana noma unomphela nanoma yisiphi isinqumo okufanele usenze kungokugcina.
Ama-Akhawunti, Ukubhaliswa, namaPhasiwedi
Uma usebenzisa leli Sayithi futhi ukusetshenziswa okunjalo kudinga ukusetha i-akhawunti kanye / noma iphasiwedi (ama), unesibopho sakho kuphela sokugcina imfihlo ye-akhawunti yakho ne-password (s) yakho nokukhawulela ukufinyelela kwikhompyutha yakho. Uma uvula i-akhawunti, ubhalisa, noma ngenye indlela usinikeza nganoma yiluphi ulwazi, uyavuma ukusinikeza ngolwazi lwamanje, oluphelele nolunembile njengoba kucelwe yinoma yimaphi amafomu. Bancaneo akabhekene nanoma yimaphi amaphutha noma ukubambezeleka ekuphenduleni noma yikuphi ukubuza noma isicelo okubangelwe yimininingwane ephelelwe yisikhathi noma engalungile enikezwe nguwe noma yiziphi izinkinga zobuchwepheshe ezingaphezu kwamandla Bancaneo. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi noma yikuphi ukungena ngemvume, okokuhlonza, noma kwephasiwedi okukhishwe maqondana naleli Sayithi (ngalinye “Iphasiwedi”) kuyimininingwane eyimfihlo futhi kufanele igcinwe iphephile. Awukwazi ukudalula lelo Phasiwedi komunye umuntu noma inhlangano noma uvumele elinye ibhizinisi ukuthi lingene eSizeni lisebenzisa lelo Phasiwedi. Kufanele wazise Bancaneo ngokushesha kwanoma yikuphi ukwephulwa kwezokuphepha noma ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho. Bancaneo awunakuba nesibopho futhi ulahle zonke izikweletu maqondana nokusetshenziswa kwanoma yiluphi ulwazi oluthumela noma ulubonise kuleli Sayithi.
Ukusetshenziswa kwakho kweSayithi nokuqukethwe kwayo akuniki amalungelo kuwe maqondana nanoma yiliphi ilungelo lobunikazi, ukwakheka, nezimpawu zokuhweba nazo zonke ezinye izimpahla ezisunguliwe namalungelo wezinto ashiwo, akhonjisiwe, noma ahlobene nokuqukethwe (okuchazwe ngezansi) kuSayithi. Konke okuqukethwe, kufaka phakathi izimpawu zokuhweba ezivela eceleni, ukwakheka, kanye namalungelo empahla obuhlakani ahlobene noma aboniswe noma aboniswe kuleSayithi, avikelwe impahla yezwe kanye neminye imithetho. Noma ikuphi ukukhiqizwa kabusha okungagunyaziwe, ukwabiwa kabusha noma okunye ukusetshenziswa kokuqukethwe akuvunyelwe futhi kungaholela ezinhlosweni zombango nezobugebengu. Ungasebenzisa okuqukethwe kuphela ngokugunyazwa kwethu okubhalwe phansi nokuzwakalayo kwangaphambili. Ukubuza ngokuthola ukugunyazwa kokusebenzisa okuqukethwe, sicela uxhumane nathi ku- [i-imeyili ivikelwe]
Ngaphezu kwamalungelo empahla yengqondo ashiwo ngenhla, "Okuqukethwe" kuchazwa njenganoma yimiphi imidwebo, izithombe, kufaka phakathi wonke amalungelo ezithombe, imisindo, umculo, ividiyo, umsindo, noma umbhalo okulesi Siza.
Bancaneo ayinaso isibopho sokuqapha leli Sayithi noma enye ingxenye yalo. Kodwa-ke, sinelungelo lokubuyekeza noma yikuphi okuqukethwe okuthunyelwe bese sisusa, sisuse, siphinde sihlele kabusha noma ngenye indlela sishintshe lokho okuqukethwe, ngokubona kwethu kuphela, nganoma yisiphi isikhathi nangezikhathi, ngaphandle kwesaziso noma esinye isibopho kuwe. Bancaneo ayinaso isibopho sokubonisa noma sokuthumela okuqukethwe. Bancaneo, ngokuya ngenqubomgomo yobumfihlo inelungelo lokudalula, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngezikhathi ezithile, noma yiluphi ulwazi noma ukuthumela okuqukethwe okubona kudingekile noma kufanelekile, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo wokwanelisa noma yikuphi okusebenzayo, umthetho, umthethonqubo, isibopho senkontileka, umthetho , inqubo yokuphikisana, noma isicelo sikahulumeni.
NGOKUVUMELEKILE NGOKUGCWELE KAKHULU NGAPHANSI KOMTHETHO OSEBENZEKAYO, BANCANEO NGOKUVELA NGOKUVUMELEKILE NANOMA YINI NANYE YONKE IZIQINISEKISO KANYE NEZIMISELO, UKUVELA OKANYE OKUFAKIWE, KUFAKA NOMA YINI (A) IZIQINISEKISO ZOKUTHENGISWA NOKUFANELEKA KWENHLOSO ETHILE NOMA UKUSETSHENZISWA KWAYO NGOKUTHI ISITOLO NOKUQUKETHWE KWAKHO, KUFANELE IZINZALO NOMA IMIPHUMELA EMAZUZWENI NGOKUSETSHENZISWA KWABO NOMA NGOKWENZA OKWENZEKA, (B) IZIQINISEKISO NOMA IZIMISO EZIVELA NGENXA YOKUSEBENZA, KANYE (C) NEZIQINISEKISO NOMA IZIMISO ZOKUTHOLAKALA OKUNGENAKUTHIWA OKANYE OKUNGANESIPHELELE. ISAYITHI NAKHO KONKE OKUQUKETHWE KULE NDAWO NEZINXAMENYE ZAKHO ZINIKEZELWA ESISEKELWENI “ESINJALO” NOKUSEBENZISA KWAKHO INDAWO KUSENGOZINI YAKHO.
Uyavuma ukuthi ngeke neze kwenzeke Bancaneo Yiba nesibopho kuwe, noma kunoma yimuphi umuntu wesithathu, nganoma iyiphi inzuzo elahlekile, okungahle kwenzeke, okulandelayo, okujezisayo, okukhethekile, noma okungaqondile okuvela noma okuphathelene neSayithi noma iMigomo Nemibandela, noma ngabe welulekelwa ukuthi kungenzeka yini lokho ukulimala, kungakhathalekile ukuthi isimangalo salowo monakalo sisekelwe kwinkontileka, isikweletu, isikweletu esiqinile noma ngenye indlela. Lo mkhawulo kwisikweletu ubandakanya, kepha awukhawulelwanga, kunoma (i) amaphutha, amaphutha, noma okungalungile kunoma yikuphi okuqukethwe noma ngokulahleka noma ukulimala kwanoma iluphi uhlobo olwenziwe nguwe ngenxa yokusebenzisa kwakho noma ukuthembela kokuqukethwe; (ii) ukudluliswa kwanoma yiziphi izimbungulu, amagciwane, amahhashi eTrojan noma okunye okungethelela okokusebenza kwakho, ukwehluleka kwemishini noma imishini kagesi; (iii) ukufinyelela okungagunyaziwe kokusebenzisa iSayithi noma Bancaneo'amaseva aphephile kanye / noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu kanye / noma imininingwane yezimali egcinwe kuyo; noma (iv) ukweba, amaphutha opharetha, iziteleka noma ezinye izinkinga zabasebenzi noma yikuphi ukuphoqelelwa kwamandla.
Uyavuma ukubuyisa futhi ubambe Bancaneo kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo, abaxhumana nabo, izikhulu, abaqondisi, abasebenzeli, nabasebenzi, abangenabungozi kunoma isiphi isimangalo, isenzo, isimangalo, ukufunwa, inhlawulo noma ukulahleka, kubandakanya nezimali zabameli ezifanele, ezenziwe noma ezivela kunoma yimuphi umuntu wesithathu ngenxa noma evela ngokusebenzisa kwakho iSayithi, ukwephula iMigomo Nemibandela noma izinto ezibandakanya ireferensi, noma ukwephula kwakho noma imuphi umthetho, umthethonqubo, ukuhleleka noma eminye imiyalo yezomthetho, noma amalungelo eqembu lesithathu.
Le Migomo Nemibandela izolawulwa futhi ichazwe ngokuhambisana nemithetho yase-Estonia futhi ngalokhu uthumela ekuphathweni okukhethekile kwezinkantolo zase-Estonia.
Uma usebenzisa noma uhlanganyela newebhusayithi futhi uneminyaka engaphansi kwengu-18 ubudala, kufanele ube nemvume yomzali wakho noma yomnakekeli osemthethweni yokwenza lokho. Ngokusebenzisa noma ukuzibandakanya nale webhusayithi, uyavuma futhi uyavuma ukuthi uvunyelwe umthetho osebenzayo wegunya lakho ukusebenzisa kanye / noma ukuzibandakanya newebhusayithi.
Ngeminye imininingwane yokuthi siluqoqa kanjani ulwazi lwakho namakhukhi, sicela ubheke Inqubomgomo yethu Yobumfihlo kanye Nenqubomgomo Yamakhukhi.
Sinelungelo lokubuyekeza nokubuyekeza le Migomo Nemibandela nganoma yisiphi isikhathi. Uzokwazi uma ngabe le Migomo Nemibandela ibuyekeziwe kusukela ekuvakasheni kwakho kokugcina kuwebhusayithi ngokubhekisa kudethi "Yosuku Lokuqala Lwenqubomgomo Yamanje" phezulu kuleli khasi. Ukusebenzisa kwakho iSayithi lethu kusho ukwamukela kwakho le Migomo Nemibandela njengoba ichitshiyelwe noma ibuyekezwa yithi ngezikhathi ezithile, ngakho-ke kufanele ubuyekeze le Migomo Nemibandela njalo.
Uma uvakashela iSayithi noma usithumela ama-imeyili, usuke uxhumana nathi ngekhompyutha. Ngokwenza njalo, uyavuma ukuthola ukuxhumana okuvela kithi ngombane. Uyavuma ukuthi zonke izivumelwano, izaziso, ukudalulwa, nokunye ukuxhumana esikunikeza kona ku-elektroniki kwanelisa noma iziphi izidingo zomthetho zokuxhumana okunjalo kubhalwe phansi.
Uma noma iyiphi yale Migomo nemibandela izothathwa njengengavumelekile, ingekho, noma nganoma yisiphi isizathu ingenakuphoqeleka, lelo gama lizothathwa njengelihlukanisekayo futhi ngeke lithinte ubuqiniso nokuphoqelela kwanoma yimiphi imigomo noma imibandela esele.
Sizovunyelwa ukwabela, ukudlulisa, noma ukunikezela ngosizo lwenkontileka lwamalungelo nezibopho zethu ngaphansi kwale migomo ngaphandle kwemvume yakho noma saziso kuwe. Ngeke uvunyelwe ukwabela, ukudlulisa, noma ukwenza isivumelwano esincane ngamalungelo akho nezibopho zakho ngaphansi kwalesi sivumelwano.
Bancaneo akanaso isibopho nganoma ikuphi ukubambezeleka okubangelwe yizimo ezingaphezu kwalokho BancaneoIzilawuli, isb. impikiswano ejwayelekile yezabasebenzi, isimo sezulu esibi kakhulu, izenzo zempi, umlilo, umbani, ukuhlaselwa kwamaphekula, ukushintsha imiyalo kahulumeni, izinkinga zobuchwepheshe, ukukhubazeka kwamandla- / tele- / ukuxhumana kwamakhompiyutha noma okunye ukuxhumana nokukhubazeka noma ukubambezeleka kwenkonzo ngabaphakeli abangaphansi ngenxa yezimo ezibekwe ngaphezulu.
Le Migomo nemibandela ibeka konke ukuqonda nokuvumelana phakathi kwakho no Bancaneomaqondana nodaba olukulo futhi luthathe konke ukuxhumana noma iziphakamiso zangaphambilini noma zanamuhla, kungaba ezobuchwepheshe, zomlomo noma ezibhaliwe maqondana neSayithi. Uhlobo oluphrintiwe lwale Migomo Nemibandela nanoma yisiphi isaziso esinikezwe ngendlela ye-elekthronikhi sizokwamukeleka ezinkambisweni zokwahlulela noma zokuphatha ezisuselwa noma ezihlobene nale Migomo Nemibandela ngezinga elifanayo futhi ngokuya ngemibandela efanayo neminye imibhalo yebhizinisi namarekhodi akhiqizwe ekuqaleni futhi igcinwe ifomathi ephrintiwe. Noma yimaphi amalungelo anganikezwanga ngokucacile lapha agodliwe. Awungeke unikeze imigomo nemibandela, noma unikeze, udlulise noma ufake amalungelo akho ngaphansi kwawo. Ukwehluleka ukwenza ngokuphathelene nokuphula umthetho okwenziwe nguwe noma abanye akusho BancaneoIlungelo lokwenza okuthile maqondana nokwephulwa okulandelayo noma okufanayo.
Lesi sivumelwano siqala ukusebenza ngosuku oqala ukungena ngalo eSizeni futhi sihlala sisebenza kuze kube yilapho sipheliswa ngokuhambisana nemibandela yaso. Ukwephulwa kwalesi sivumelwano kungaholela ekuqedeni ngokushesha kwalesi sivumelwano futhi kunqatshelwe noma kunqanyulwe ukufinyelela kwakho eSizeni. Imikhawulo enjalo ingaba yesikhashana noma ehlala unomphela. Lapho unqanyulwa, ilungelo lakho lokusebenzisa leli Sayithi lizohoxiswa. Konke ukuzikhipha emithethweni, ukulinganiselwa kwesikweletu, izibopho, namalungelo obunikazi namalayisense woku Bancaneo uzosinda kunoma yikuphi ukuqedwa.
Uma unanoma yimiphi imibuzo, izikhalazo, nemibuzo noma ukubika noma yikuphi ukwephulwa, thumela i-imeyili ngomusa ku [i-imeyili ivikelwe]